छुट्टीको ईर्ष्या: मतली र पेट दर्दको उपचार कसरी गर्ने - स्वास्थ्य शिक्षा | सेप्टेम्बर 2021
औषधि जानकारी, स्वास्थ्य शिक्षा प्रेस कल्याण खेलहरु घरपालुवा जनावर मनोरञ्जन कम्पनी, औषधि जानकारी कम्पनी समुदाय, कम्पनी समुदाय, कल्याण समाचार, कल्याण कम्पनी, स्वास्थ्य शिक्षा स्वास्थ्य औषधि जानकारी, समाचार कम्पनी, समाचार
मुख्य >> स्वास्थ्य शिक्षा >> छुट्टी ईर्ष्यालाई कसरी जोगाउने — वा उपचार गर्ने
छुट्टी ईर्ष्यालाई कसरी जोगाउने — वा उपचार गर्ने
यो वर्षको फेरि समय हो — खाना, खाना, र अधिक खाना। छुट्टिहरु क्रिम्प भइरहेको छ। हामी धेरैको लागि, साथीहरू र परिवारसँग डिकडेन्ट मिठाईहरू र धनी, बोसो (र स्वादिष्ट!) खानाको अतिरिक्त भोग ईर्ष्या र अपचको भारी पक्षको साथ आउँदछ।
वर्षको यस समयमा विकास गर्न सक्ने तनाव र चिन्ता जोड्नुहोस्, यो भन्दा बढि आश्चर्यको कुरा होइन Million करोड अमेरिकीहरू ढिलो जलिरहेको अनुभूति अनुभव गर्दैछ जुन तपाईंको छातीमा कम्तिमा एक पटक एक पटक काम गर्दछ। यो बाहिर जान्छ कि छुट्टिहरु मनाउने समय मात्र होईन - यो त्यस्तो समय हुन सक्छ जब हामी मध्ये कसैकसैले ईर्ष्या र एसिड भाटा अनुभव गर्दछौं।
यदि तपाईंले कहिल्यै पेटमा दुखाइ वा अस्वस्थता महसुस गर्नुहुन्छ भने आफ्नो छातीलाई घाँटी र घाँटीतिर सार्दै हुनुहुन्छ भने, सम्भाव्यता तपाईलाई ईर्ष्याको अनुभव छ। ईर्ष्या तब हुन्छ जब अत्यधिक मात्रामा एसिड तपाईंको पेटबाट माथि सर्दछ।
जे भए पनि यो महसुस हुन सक्छ कि तपाइँलाई मुटुको चोट लाग्यो (र नामको बाबजुद), ईर्ष्याले तपाईको मुटुसँग केही गर्नु हुँदैन। सरल शब्दमा भन्ने हो भने, यो एसिडको संवेदना हो तपाईको एसोफैगस र घाँटीलाई उत्तेजित पार्ने।
छुट्टीहरूमा म किन ईर्ष्या लाग्छ?
ठुलो खाना खाइसकेपछि ईर्ष्याको अनुभव गर्नु सामान्य हो, विशेष गरी बोसोको उच्चमा र धेरै व्यक्तिको लागि छुट्टीको खाना जस्तो खालको हुन्छ। बोसोयुक्त खानाहरू (जस्तै हरियो बीन कासरोल वा ग्रेभी) र अधिक खाँदा पाचनलाई ढिलो गर्न सकिन्छ, जसले एसिड भाटालाई पनि योगदान पुर्‍याउँछ।
के meloxicam 15 मिलीग्राम को उपचार को लागी प्रयोग गरीन्छ
र त्यो पोस्ट-थैंक्सिंग भोजन नप तपाईंलाई लिन मनपर्‍यो? ठिक छ, त्यसले पनि सहयोग गरिरहेको छैन। ठूलो, रमाईलो खाना खाइसकेपछि, सुत्दा तपाईंको ईर्ष्याको सम्भावना बढ्नेछ। जब तपाईं इमान्दार हुनुहुन्छ, गुरुत्वाकर्षणले पेटको एसिड कम राख्न मद्दत गर्दछ - तर फुटबल हेरिरहेको बेला पलंगमा झुप्प्याउँदा एसिडलाई तपाईंको एसोफ्यागसमा प्रवेश गर्न रोक्दैन।
छुट्टी ईर्ष्या कसरी जोगाउने
छुट्टी ईर्ष्या रोक्न उत्तम तरिका भनेको यो हुनबाट रोक्नको लागि हो। तपाइँलाई मद्दत गर्न यहाँ केहि सुझावहरू छन् बेवास्ता गर्नुहोस् यसको सबैभन्दा खराब:
तपाइँ हप्ताहरूमा पूरा हुँदा छुट्टिमा अग्रसर हुँदा खान रोक्ने अभ्यास गर्नुहोस्।
ट्रिगर गर्ने खाद्य पदार्थहरू हटाउनुहोस् जुन प्रायः मसलादार, उच्च फ्याट, र चिल्लो हुन्छ। त्यो पनि समावेश छ क्रैनबेरी सॉस र टर्की छाला।
तपाईंले पिउनु भएको कफी र मदिराको मात्रा घटाउनुहोस्, र सम्भव हुँदा शीतल पेयबाट बच्नुहोस्।
खाना पछि टहल्न जानुहोस्।
खाना पछि कम्तिमा एक घण्टा सम्म झूटबाट बच्नुहोस्।
तपाईंसँग एन्ट्यासिडहरू बोक्नुहोस् र खानु अगाडि केहि लिनुहोस्।
एसिड रिफ्लक्सलाई सजिलो बनाउन मद्दत गर्ने खाद्य पदार्थहरू खानुहोस्, जस्तै तरकारीहरू, गैर सिट्रस फलहरू, दुब्ला मासु, अण्डा गोरा, अदुवा, र दलिया।
म कसरी छुट्टीको ईन्डर्नबाट छुटकारा पाउन सक्छु?
यसलाई बेवास्ता गर्न तपाईको उत्तम प्रयासको बाबजुद पनि छुट्टिहरु हाम्रा धेरैजसोलाई ईर्ष्याको अनुभवको लागि मुख्य समय हो। किनकि कसले मनलाग्दो खानाको साथ मनपर्दैन ?! भाग्यवस, त्यहाँ धेरै प्रभावकारी उपचार विकल्पहरू उपलब्ध छन् यदि तपाईंले ठूलो खाना पछि दु: ख भोग्नुभयो भने।
ईर्ष्यालु राहतका लागि लोकप्रिय ओटीसी औषधिहरूले एन्ट्यासिडहरू समावेश गर्दछ टम्स वा Rolaids , जो पेट एसिड र एसिड अपच को बेअसर गर्न काम गर्दछ। केहि व्यक्तिले एसिड ब्लकरहरूलाई रुचाउँछन्, जसले पेटको एसिडको वास्तविक मात्रालाई कम गर्दछ, जस्तै Axid AR , Pepcid AC , वा Tagamet एचबी ।
कुनै राम्रो ईन्टरनेशन औषधी लिनु वा उपचार उपचार सुरु गर्नु अघि एउटा ठूलो छुट्टीको खाना खानु भन्दा पहिले वा बुफेमा लिप्त हुनु राम्रो उपाय हो।
सम्बन्धित : Prevacid vs Prilosec: मुख्य भिन्नता र समानताहरू
यदि तपाईंको मुटुबहल अधिक नियमित वा गम्भीर छ र ओटीसी विकल्पहरूले यसलाई काटिरहेको छैन भने, तपाईंको लक्षणहरू ग्यास्ट्रोइसोफेगल रिफ्लक्स रोग (जीईआरडी) भनिने चिकित्सा अवस्थाको लक्षण हुन सक्छ। यस अवस्थामा तपाईलाई डाक्टरको भ्रमण र औषधि आवश्यक पर्दछ। यी सामान्यतया ओटीसी ब्रान्ड विकल्पहरूको मजबूत संस्करणहरू हुन् Prilosec , Prevacid र Nexium ।
जीईआरडीले २०% अमेरिकीलाई असर गर्छ। यो कुनै संयोग होइन कि हप्ता शुक्रबार (नोभेम्बर १-2-२3) अघिल्लो हो गर्ड जागरूकता हप्ता । यदि तपाईंसँग जीईआरडीका लक्षणहरू छन् भने, तपाईंको हेल्थकेयर प्रदायक वा ग्यास्ट्रोएन्टेरोलॉजिष्टसँग अपोइन्टमेन्ट समय तालिका बनाउनुहोस् ताकि तपाईं छुट्टी पार्टीहरू ईर्ष्या-मुक्तबाट आनन्द लिन सक्नुहुनेछ।
मसँग कुनै स्वास्थ्य बीमा छैन र एक डाक्टर हेर्न आवश्यक छ
यदि तपाईं साच्चिकै गोलीबाट बच्न चाहानुहुन्छ भने, धेरै व्यक्तिहरूले भन्छन् कि यदि तपाईं भर्खर नपुगुञ्जेल मात्र खानुहुन्छ भने, यसले अपच र ईर्ष्यालाई कम गर्न मद्दत गर्दछ। अवश्य पनि छुट्टीको मौसममा गरेको भन्दा यो निश्चित नै छ, तर यदि तपाईं टर्की र स्टफिंग प्रस्तुत गर्नु अघि राम्रो बानीमा पर्नुभयो भने, तपाईंलाई यो सजिलो हुँदैन बढि ।
यसले तपाईंको खाना खाए पछि केही बेरको लागि हिड्नुपर्दछ। यसले पाचनलाई मद्दत गर्दछ र गुरुत्वाकर्षणलाई तपाईंको पक्षमा काम गर्न मद्दत गर्दछ।
अब छुट्टीको मौसमको आनन्द लिनुहोस् gast गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल समस्या बिना।
१ Best सर्वश्रेष्ठ मुसब्बर वेरा जेल हात सेनिटाइजर बनाउन को लागी
एजिथ्रोमाइसिन बनाम अमोक्सिसिलिन: भिन्नता, समानताहरू, र जुन तपाईंको लागि उत्तम छ
3 दिन पछि योजना बी प्रभावी छ
कसरी zoloft बाट prozac मा स्विच गर्ने
स्वाभाविक रूप बाट छिटो खमीर संक्रमण बाट छुटकारा पाउनुहोस्
तपाइँ कहिले योजना लिनु पर्छ b
म कान दुखाइ को लागी के प्रयोग गर्न सक्छु